Vaovao - Fandehanan'ny fikorianan'ny fantsom-pilazana matetika
Fandehanan'ny fizotran'ny tariby vita amin'ny pilaire matetika
Fitaovana fantsom-pandrefesana avo lenta matetika dia misy uncoiler, milina mahitsy, masinina manara-penitra, welder volo, fitehirizana tanany mivantana, milina fandrefesana, tsofa fandefasana solosaina, milina lohan-doha, milina fanandramana hydraulic, roller roller, fitaovana fitadiavana kilema, baler , taratra DC matetika, fitaovana mandeha amin'ny herinaratra feno, sns. Ny toetra mampiavaka ny tariby fantsom-pandrefesana avo lenta dia ny: hafainganam-pandeha avo, ny faritra misy ny hafanana kely, ny fametahana ny workpiece dia tsy azo diovina, fantsom-rindrina matevina azo amboarina, vy azo alaina fantsona.
Ny fizotran'ny famokarana fantsom-pandrefesana fantsom-pandrefesana matetika dia miankina amin'ny karazany vokatra, manomboka amin'ny akora hatramin'ny vokatra vita dia mila mandalo dingana maromaro hamita ireo dingana ireo dia mitaky milina sy fitaovana ary welding, fanaraha-maso elektrika, fitaovana fitsapana, ireto fitaovana sy fitaovana mifanaraka amin'ny fepetra takiana amin'ny dingana samihafa dia manana fandaminana mirindra, fantsom-pandrefesana fantsom-pandrefesana avo lenta matetika: fanetezam-boalavo - tsy fisokafana - fametahana lamba - fanetezana ny loha sy ny rambony - fametahana vodin-doha - fitehirizana tanany mivantana - fananganana - fehin-kibo - fanesorana burr - sizika - fitadiavana lesoka - fanapahana sidina - fanaraha-maso voalohany - fanitsiana fantsom-pandrosoana - fanandramana fizarana fantsona - fitsapana hydraulic - fitadiavana lesoka - fanontana sy firakotra - vokatra vita.
Raiso ho ohatra ny milina fanaraha-maso fantsom-pahefana, ny fizotran'ny famokarana fitaovana dia ahitana ireto manaraka ireto.
1. Fampidinana: amin'ny alàlan'ny fametahana entana dia hapetraka mifanaraka amin'ny tady vy, amin'ny alàlan'ny tady famindrana herinaratra mandeha amin'ny motera mankany amin'ny faritra miforona, manohy hatrany.
2. Fizarana: ny tsipika vy fisaka amin'ny alàlan'ny famolavolana die die extrusion, ny fiandohan'ny prototype fantsom-by vy.
3. Fizarana fanamafisam-peo: ny sisiny roa amin'ny tady vy dia nanakodia, tamin'ny alàlan'ny fantsom-panafody avo lenta, fantatra amin'ny anarana hoe vy fantsom-by.
4. Fizarana fikosoham-bary: ny toetran'ny mari-pana avoakan'ny fantsom-by amin'ny alàlan'ny fantsom-panafody rano, ny fitotoan'ny fantsom-bozaka vy tsy miova, manatsara ny fisaka amin'ny seam seam.
5. Sizing sy mahitsy: ny boriborin'ny fantsom-pandefasana fantsom-by amin'ny alàlan'ny fantsom-panafana ny hafanana avo sy ny fampangatsiahana rano dia hanana fiovana kely. Ny habe sy ny fanitsiana amin'ny alàlan'ny rollers, ny famaritana farany ny boribory na ny fahatokisan'ny fantsom-by vy.
6. Fantsahana fanapahana: amin'ny alàlan'ny fanapahana ny tsofa na ny fanapahana hydraulic, arakaraka ny tena ilain'ny mpampiasa fantsom-pandrefesana lava fantsona.
7. Cinder ny fitaovana: avy ambanin'ny trano an-trano, tsy misy simba tsy misy tsindry hametrahana ireo vokatra semi-vita.
8. Poloney: ny vokatra vita amin'ny semi-vita dia entina mankany amin'ny milina fandefasana fantsom-by ho an'ny famolavolana injenieran'ny fonosana vita amin'ny vokatra.
9. fonosana: ny fantsom-pandrefesana vita amin'ny krystaly vokatra mamirapiratra amin'ny alàlan'ny milina famonosana na fonosana tanana ho an'ny fandefasana.
Fantaro ireo teboka 9 ireo, momba ny fizotry ny famokarana fitaovana fantsom-boalavo tsy misy olana. Ny divay tsara tsy mila kirihitra, fa koa mba hampiasa ny fomba mety, ary koa hahita mpamokatra tsara mba hanana fitarihana iray.